Smartphone နဲ့ အလှဓာတ်ပုံတွေ ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ?
Smartphone ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်မယ်လို့ စဥ်းစားလိုက်ရင် ဘယ်အချက်ကို ဦးစားပေးဖြစ်လဲ? အများစုက စွမ်းဆောင်ရည် ၊ ကင်မရာနဲ့ Display ၊ Design လို့ ဖြေကြမှာပါ။
ဒီလို ဖုန်းတွေမှာလည်း ရွေးချယ်စရာ မျိုးစုံရှိနေသလို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အနေထားလိုက် အံကိုက်ဖြစ်မယ့် မော်ဒယ်ကြံရတာ တကယ်လည်း ခက်ခဲပါတယ်။
ငွေကြေးပြည့်စုံရင် အထွေထူး ပြဿနာ မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုပေမယ့် လိုအပ်လို့ ဝယ်ရမယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူတွေ ဘယ်လိုစဥ်းစားကြပါသလဲ?
Budget ချိန်ပြီး စဥ်းစားရတဲ့ အလုပ်က အရွေးမတော်ရင် နောင်တရတတ်သလို ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ကင်မရာပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်။
စကားချီးစထားသလို ဖုန်းတစ်လုံးမှာ အခြေခံလိုအပ်ချက် ၃ မျိုး ရှိတယ်လို့ တွေးနိုင်သလို ခေတ်အနေထားအရ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းပြီးသွားရင် ဒုတိယဦးစားက ဖုန်းကင်မရာလို့ ပြောရမှာပါ။
ဒီတော့ စာဖတ်သူ မှတ်ယူနိုင်တာက Smartphone ကင်မရာဟာ မော်ဒယ်အလိုက် မတူညီသလို အရည်သွေးပိုင်းမှာလည်း တန်ဖိုးအလိုက် စကားပြောမှာပါ။
How Smartphone Cameras can make difference
ဒါပြီးသွားရင် ဖုန်းကင်မရာကို ဘယ်လို အသုံးပြုကြသလဲ ဆိုတာကလည်း အရေးပါပါတယ်၊ စာရေးသူ အနေနဲ့ ကင်မရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးစားပေး ဖော်ပြပေးလိုတာက Sensor တစ်ခုချင်းစီ ဘယ်လို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်မလဲ၊ ဒါကို OPPO Reno3 Pro စမတ်ဖုန်းနဲ့ ပမာပြုပြီး တင်ဆက်ပါမယ်။
ပထမဆုံး သတိပြုဖို့လိုတာက ကိုယ်ရိုက်မယ့်အနေထားနဲ့ Camera Angle ပါ။ အထူးသဖြင့် Portrait ပုံလှလှနဲ့ ရှုခင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်တဲ့အခါမှာ ယူတဲ့ Angle တလွဲဖြစ်နေရင် ထွက်လာမယ့် Result ကလည်း မမျှော်လင့်စရာပါ။
ဒါကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ နေရာယူမှန်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပြီးသွားမှ ကိုယ်အသားပေးရိုက်ချင်တဲ့ ပုံရိပ်ကို ဘာ Sensor နဲ့ ရိုက်မလဲ? ဆိုကြပါစို့ အိမ်မှာ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် အလင်းဝင်အား ကောင်းစေမယ့် Primary Shooter ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
Reno3 Pro Smartphone မှာ ပါဝင်တဲ့ 64MP Sensor ဟာ Aperture f/1.7 ရှိတဲ့အတွက် အလင်းစုပ်ယူအား ကောင်းသလို Pixel-binning နည်းပညာ သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုပြီးတော့ Detail ကျကျရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ 64MP Sensor ဟာ Dynamic Range ကောင်းကောင်း ၊ Detail ကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မယ့် Ultra Clear 108MP Mode ထောက်ပံ့တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်တွေကို ကင်မရာ အားသာချက်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
တကယ်လို့ နည်းနည်းလေး ဆရာကျချင်ရင် Smartphone မှာပါဝင်လေ့ရှိတဲ့ Pro Mode (သို့) Manual Mode သုံးပြီး အလင်း၊ အမှောင်ကို နှစ်သက်သလို ချိန်နိုင်မယ်။
ISO နဲ့ Exposure Time ကို အဆင်ပြေသလို ဆွဲယူပြီး ရိုက်ကူးနိုင်သလို Colour ၊ Contrast ၊ Saturation အစရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အသုံးချပြီး ပုံကောင်းကောင်းရအောင် Primary Sensor နဲ့ ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ စွမ်းပကား ဒီမှာတင် ရပ်တန့်သွားတာ မဟုတ်လို့ တွဲရက်ပါလာတဲ့ Tele နဲ့ Ultra-wide တို့က ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ အသုံးဝင်သလဲ?
Reno3 Pro မှာ 13MP Telephoto Lens တစ်လုံး ၊ 8MP Ultra-wide တစ်လုံးနဲ့ 2MP (B/W) 3cm Macro Lens တစ်လုံး ပါဝင်တဲ့အတွက် အခုလို မတူညီတဲ့ Camera Lens တွေကို ဘယ်လို အသုံးချနိုင်မလဲ?
Telephoto Lens တွေဟာ အများအားဖြင့် Depth of Field ကောင်းကောင်း ဖမ်းယူပေးနိုင်တာမလို့ အသားပေး ရိုက်ကူးလိုတဲ့ Object ကို Focus ထားတဲ့အခါ Primary Sensor ထက် အကျိုးထူးစေပါတယ်။
ဒါက သီအိုရီကို ရွတ်ပြတာပါ၊ သတိပြုရမယ့်အချက်က Tele ကို Indoor ထက် Outdoor မှာ အသုံးပြုသင့်သလို အကြောင်းပြချက်က ပိုပြီးတော့ လင်းလင်းထင်းထင်း ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။
Ultra-wide Sensor တွေက စာဖတ်သူတွေ သိထားသလို မြင်ကွင်းကျယ် ပုံရိပ်တွေ ဖမ်းယူနိုင်တဲ့အတွက် အလှပ ရှုခင်းပုံ ရိုက်တဲ့အခါဖြစ်စေ ၊ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေ ဖန်တီးတဲ့အခါ အသုံးတည့်ပါတယ်။
Pro Modes and other Features
Primary Sensor လောက် Powerful မဖြစ်ပေမယ့် Tele လို နေရာ မရွေးတဲ့အတွက် အထွေထူး စဥ်းစားစရာ မရှိပါဘူး။ တစ်ခုပဲ သတိမှုရမှာက လူပုံရိုက်တဲ့အခါ Lens Distortion နည်းဖို့ Position ကောင်းကောင်းချနိုင်ဖို့ပါ။
အခုလို Main Cameras လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပြင် Features ပိုင်း လုပ်ဆောင်ချက် အနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Night Mode ကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့။
များသောအားဖြင့် အလင်းရောင်အားနည်းချိန်နဲ့ ညချမ်းအချိန်မှာ အသုံးပြုဖို့ အသင့်လျော်ဆုံး အဆိုပါ Feature ဟာ သာမန်အနေနဲ့ ရိုက်ကူးတာထက် ပိုကောင်းတဲ့ ရုပ်ထွက်ပေးစွမ်းနိုင်တယ်။
OPPO Reno3 Pro မှာ Ultra Night Mode ပါဝင်ပြီး အလင်းရောင်အားနည်းချိန်နဲ့ ညအချိန်တွေမှာ Detail ကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါတယ်။
အခု ပြောသွားတဲ့ Sensor ၃ မျိုးအပြင် တွဲပါလာတတ်တာ Depth Sensor (သို့) Macro Lens တွေပါ။ Depth Sensor ကတော့ Portrait ပုံဖမ်းတဲ့အခါ Tele Lens ထက် Focus ထားပေးနိုင်သလို Background Blur ကို နှစ်သက်သလို ချိန်ငြိနိုင်တဲ့အတွက် အသုံးတည့်ပါတယ်။
Macro ကိုတော့ Close-up Shot တွေမှာ သုံးကြပြီး သီအိုရီအရ 4cm အကွာဝေးမှာ ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး Detail ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖမ်းယူပေးနိုင်တဲ့ Sensor ကို ပြောတာပါ။
ဒီတော့ ဖုန်းကင်မရာ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ Sensor အကြောင်း သိသွားရင် တစ်လုံးချင်းစီ အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုရိုက်ရမလဲ လေ့ကျင့်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတယ်။
အမှတ်တရပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အလှဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် Sensor တွေက သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးတည့်တာမို့ စာဖတ်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ပြောဖို့ကျန်နေတဲ့အချက်က ကျောဘက်ကင်မရာ တင်မဟုတ်ဘဲ Selfie အတွက် ထည့်သွင်းထားတဲ့ Sensor တွေ အရေးပါတဲ့ အကြောင်းပါ။
Reno3 Pro Smartphone မှာတော့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး44MP+2MP Dual Punch-hole Camera ပါဝင်ပြီး ထူးခြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တွေအနေနဲ့ Ultra Night Selfie Camera ၊ Dual Lens Bokeh စတဲ့ Features တွေ အသုံးပြုနိုင်တာပါ
အများစုက အလှအပ Portrait ပုံတွေ ရိုက်ဖို့ သုံးကျသလို Social Media အတွက်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ဘာသာ လှလှပပ ဖန်တီးတတ်ကြပါတယ်။
ဒိအတွက် OPPO ကနေ စိတ်ဝင်စားစရာ Challenge လုပ်ပေးနေသလို လက်စွမ်းပြဖို့လည်း အခွင့်ရေး ရှိပါတယ်။ Reno3 Pro အတွက် ရည်ရွယ်ထားပေမယ့် ပါဝင်တဲ့ စည်းမျဥ်းနဲ့ သတိပြုစရာကို အရင်တင်ဆက်ပါမယ်။
Selfie Portrait ရိုက်တဲ့အခါ အလင်းရောင် ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။ သင့်တင့်သလောက် အလှပြင်ပြီးသွားရင် Primary Lens မှာတုန်းက Angle မှန်မှန်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
အဲဒီအတွက် OPPO ကနေ စိတ်ဝင်စားစရာ Challenge လုပ်ပေးနေသလို လက်စွမ်းပြဖို့လည်း အခွင့်ရေး ရှိပါတယ်။ OPPO ရဲ့ Challenge အစီစဥ်က COVID-19 ဖြစ်ပွားနေစဥ် အိမ်မှာနေရင်း အလှဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း ကံထူးနိုင်မယ့် အခွင့်ရေးပါ။
OPPO ရဲ့ Challenge အစီစဥ်က COVID-19 ဖြစ်ပွားနေစဥ် အိမ်မှာနေရင်း အလှဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း ကံထူးနိုင်မယ့် အခွင့်ရေးပါ။
ဒါကို Morning ၊ Afternoon နဲ့ Night Session ၃ မျိုးနဲ့ 24 Hours City Challenge ကျင်းပနေပြီး လက်ရှိ ယှဥ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ Challenge က My Perfect Shot At Home ဆိုတဲ့ Afternoon Challenge ပါ။
နိုင်ငံကျော် ဓာတ်ပုံဆရာ Mr.Haw က မတ်လကမှ အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ မြန်မာ‌ကျပ်ငွေ 629,900 ကျပ် တန်ဖိုးရှိ OPPO Reno3 Pro ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Camera Functions တွေနဲ့ Ultra Night Mode၊ Portrait Mode တို့ကို အသုံးပြုပြီး အိမ်မှာ မည်သည့်အလင်းရောင် အခြေအနေ၌မဆို အမြင်ဆန်းသစ်လှပသည့် ဓာတ်ပုံများကို ဖန်တီးထားတာပါ။
အဆိုပါ Challenge ကို မေလ ၂၁ ရက်ကနေ ၂၄ ရက် အထိ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပရိတ်သတ်များ အနေနဲ့
#24HoursCity #AfternoonSession #Reno3ProChallenge #ShotAtHome
အစရှိတဲ့ Hashtag တွဲပြီး အိမ်တွင်းမှာ ဖန်တီးထားတဲ့ အလှဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ယှဥ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ Challenge မှာ နိုင်ငံကျော် ဓာတ်ပုံဆရာ Mr.Haw က ပရိသတ်များ (၅)ဦးကို မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ၂၀,၀၀၀ တန် ဖုန်းဘေလ် ချီးမြင့်မယ့်အပြင် Mr.Haw ရဲ့ တစ်ရက်တာ Private Online Workshop ကို တက်ရောက်နိုင်မှာပါ။
ဒါကြောင့် စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံဖန်တီးရ ဝါသနာ ထက်သန်သူတွေ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ အခွင့်ရေးလို့ ဆိုရမှာပါ။
Challenge နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ထပ်မံသိရှိချင်တယ်ဆိုရင် 24 Hours City Challenge : Afternoon Session Campaign Link နဲ့ OPPO ရဲ့ Official Facebook Page မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
OPPO Myanmar Press Release ကို ကောက်နှုတ် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။